Nezvedu - Chinatown Zviyo Machinery Co., Ltd.
Chinatown Zviyo Mashini Co, Ltd. inopa yakakwana michina uye sevhisi yekugadzira chikafu uye zviyo kugadzira maindasitiri, senge gorosi furawa chigayo, furu fekitori, uye mupunga kugadzira chirimwa. Parizvino, zvigadzirwa zvedu zvinosanganisira kuendesa michina, yekuchenesa michina, hupfu hwokugaya michina, zvichingodaro. Ivo vakave vanozivikanwa nenhamba yevatengi zvese kumba nekune dzimwe nyika.
Iyo kambani inotarisana nehunyanzvi hwekuvandudza, kuvandudza kugona kwekugadzira uye mhando yemuchina. Iyo kambani yakatungamira mukuburitswa kweCCC laser yekucheka muchina, CNC kukotama muchina, CNC lathes uye zvimwe zvemberi zvigadzirwa zvekugadzirisa.
Panguva imwecheteyo yakatengwa CNC machining centre, CNC inofinha muchina, CNC lathe muchina, pamusoro pekugaya, muchina wemuchina uye zvimwe zvemberi zvekugadzirisa zvigadzirwa zvemari, uye yakawedzera electrostatic yekutsikisa yekugadzira mutsara. Iyo mhando yechigadzirwa inogona kuvimbiswa neiyi yakavimbika michina yekugadzira michina.
Kambani yedu inotora simbi yeplate laser yekucheka muchina, CNC yekukotama muchina, kabhoni dhayokisheni arc kutenderera uye argon arc kutenderera, kuwera chiyero, rotary otomatiki kunyorera, electrostatic kupurudzira pamusoro pekurapa, kuenderera kuvandudza uye hutsva mamodheru. Zvigadzirwa zvedu hazvisi chete zvine mashandiro akanaka, asi zvakare zvakareruka kuisa uye kugadzirisa nemutengo wakaderera. Icho chigadzirwa chine hunyanzvi hwemberi, hwakavimbika mhando, uye wakanaka chitarisiko chakakosheswa nevatengi vatengi.